30+ Tài liệu học lập trình game hay cho developer | Anybook.vn - Anybook
30+ Tài liệu học lập trình game hay cho developer | Anybook.vn
Mila references ny mpamorona lalao indraindray mba hahazoana hevitra vaovao na hanavao fotsiny ny fahalalany indostrialy. Na izany aza, mandany fotoana be ny asa ary saika tsy manam-potoana hikaroka loharano vaovao ianao?
ITviec dia nisafidy ny fitaovana fandaharana lalao tsara indrindra ao anatin’izany ny ebook, fampianarana an-tserasera, forums, fampianarana hanampy anao:
Ianaro ny fototry ny fandaharana lalao.
Mamolavola fahaiza-misaina tena ilaina.
Misy toerana hifanakalozana sy hifanakalozana amin’ny Mpamorona lalao hafa.
Jereo ny asan’ny Game Developer amin’ny ITviec
Amin’ny maha Developer Game, tianao ve?
Amin’ny fandaharana lalao, ny subjectivity dia mora ny mandoa lafo
1 Ebook tsara ho an’ny mpamorona lalao
1.1 1. Manomboka Android 4 Games Development
1.2 2. Lalao Android 4 mandroso
1.3 3. Fitaovana ilaina amin’ny fampandrosoana lalao
1.4 4. Manomboka iPhone Games Development
1.5 5. Mianara Kit Sprite ho an’ny mpamorona lalao
1.6 6. Fampandrosoana lalao miaraka amin’ny Swift
1.7 7. Fitsapana lalao: All in One
1.8 8. iPhone 3D fandaharana
2 Mazava tsara ny fandaharana lalao an-tserasera
2.1 1. Fototry ny fampandrosoana lalao miaraka amin’ny Python (Saram-pianarana: $ 14)
2.2 2. Fampandrosoana lalao HTML5 (maimaim-poana)
2.3 3. Famolavolana lalao 2D mandroso miaraka amin’ny HTML5 (maimaim-poana)
2.4 4. Mianara Fampandrosoana lalao C++ (Saram-pianarana: $ 14)
2.5 5. Hevitry ny Unity3d (maimaim-poana)
3 Torolalana mahasoa ho an’ny mpamorona lalao
3.5 5. Fampivoarana fampiharana Android Tutorials
4 Taratasy fandaharana lalao hafa
4.2 2. Institiota lalao
5 Forums lalao sy tranokalam-baovao amin’ny teny vietnamiana
Ebook tsara ho an’ny mpamorona lalao
1. Manomboka Android 4 Games Development
Ity dia antontan-taratasy fandaharana lalao izay mila vakiana izay Dev izay vao avy nivadika tamin’ny fandaharana lalao Android 1.5 – 4.0. Hanampy anao ny boky:
Manana fahalalana fototra momba ny lalao finday amin’ny Android.
Ampiharo avy hatrany ny fahalalana nianarana tamin’ny fanaovana kaody lalao fototra.
Fantaro ny fomba fametrahana sy fampiasana fitaovana mifandraika amin’izany.
Ahoana ny fampiasana API Android ho an’ny sary, feo ary fampidirana mpampiasa.
2. Lalao Android 4 mandroso
Amin’ny maha-boky efa mandroso taorian’ny “Fanombohana ny fampandrosoana ny lalao Android 4”, dia hanampy anao hanatsara ny fahaizanao sy ny fahalalanao momba ny App Game amin’ny sehatra Android.
Ho fanampin’ny fahalalana sy fahaiza-manao etsy ambony dia hianatra ihany koa ianao:
Ahoana ny fomba hanampiana endritsoratra tsara tarehy, API UI/IX, kaody multi-touch
Ahoana ny fomba hanafainganana ny fampisehoana sy endri-javatra maro kokoa.
READ React Native là gì? Top 20 tài liệu học React Native mới nhất năm 2022 | Anybook.vn
Ireo devs izay nianatra tamin’ny alalan’ny boky “Manomboka ny Android 4 Games Development” na manana fototra mafy orina amin’ny Android dia afaka mahatakatra tsara ity boky ity.
3. Fitaovana ilaina amin’ny fampandrosoana lalao
Ity dia antontan-taratasy fandaharana lalao tena ilaina ho an’ny Devs vao manomboka sy efa za-draharaha, ary koa manampy amin’ny toerana ara-teknika hafa hahatakatra ny fomba fitantanana lalao.
Ny votoatin’ny boky dia ahitana:
Torohevitra sy fika maro avy amin’ny manam-pahaizana.
Hevitra azo tsapain-tanana sy lalina hanampy anao hanao fandaharana sy hiasa amin’ny fomba mahomby kokoa.
Ahoana ny fampiasana fitaovana fototra hanatsarana ny fahaiza-manao sy ny kalitaon’ny vokatra.
Noho izany, tsy i Dev ihany no manao ny asany tsara fa afaka mandrindra tsara amin’ny departemanta hafa amin’ny fampandehanana ny lalao.
4. Manomboka iPhone Games Development
Ny lalao fandaharana amin’ny iPhone dia lohahevitra “mafana” foana ho an’ny Devs. Noho izany, ity boky ity dia ho dingana voalohany tena ilaina ho an’ny mpamorona izay te-handamina lalao iOS sy manana fahalalana fototra fandaharana finday. Hanampy anao ny boky:
Fantaro ny fomba fandrafetana sary 2D sy 3D eo amin’ny efijery iPhone.
Fantaro ny teknika hamoronana sary mihetsika manokana amin’ny lalao miaraka amin’ny Core Animation.
Manaova seho mihetsika manomboka amin’ny mora mankany be pitsiny, ampio vokany, feo, mamorona endri-javatra ho an’ny mpilalao 2 na mihoatra.
5. Mianara Kit Sprite ho an’ny mpamorona lalao
Rehefa navoaka ny iOS 7 dia namoaka Kit Sprite vaovao avy hatrany i Apple mba hanampy amin’ny famolavolana lalao amin’ny sehatra iOS ary nampiasain’ny Dev maro.
Ity antontan-taratasy fandaharana lalao ity no torolàlana tonga lafatra ho an’ireo izay vao manomboka amin’ny fandaharana lalao iOS na te hahazo fahatakarana lalindalina kokoa momba ny fitaovana.
Hianatra ny fomba fanaovana lalao tsotra ianao amin’ny fampifangaroana Sprite Kit amin’ny UIKit ary koa ny fomba fivarotana lalao amin’ny App Store.
6. Fampandrosoana lalao miaraka amin’ny Swift
Ny antontan-taratasin’ny fandaharana lalao dia tena ilaina tokoa ho an’ireo izay vao manomboka mianatra ny fiteny Swift amin’ny fandaharana lalao amin’ny sehatra iOS.
Ho azonao ny endri-javatra tsara indrindra amin’ny Swift ampiharina amin’ny fandaharana lalao ary mitambatra amin’ny Sprite Kit mba hamitana ny iOS App fototra.
Mba hahatakarana ny fahalalana ao amin’ny boky dia mila manana fahalalana fototra momba ny fandaharana iOS na fandaharana Mobile Game ianao.
7. Fitsapana lalao: All in One
“Fitsapana lalao: All in One” no dikan-teny farany amin’ny boky malaza mitovy anarana, izay “ondana eo am-pandriana” an’ny Game Testers/QA. Ny boky dia hanome anao:
Fahalalana momba ny Fitsapana lalao sy fitaovana azo ampiharina amin’ity asa ity.
Tariho tsikelikely amin’ny dingana fitsapana amin’ny fomba QA ilaina, fenitry ny fandrefesana kalitao.
Fandinihana tranga maro azo ampiharina momba ny lalao amin’ny sehatra finday, lalao amin’ny Internet, tambajotra sosialy ho fanondroanao.
Fanontaniana, fanazaran-tena, lasitra, latabatra mba hahafahanao manao fitiliana avy hatrany.
Ity antontan-taratasy fandaharana lalao ity dia mety amin’ny Devs rehetra izay miasa ao amin’ny indostrian’ny lalao ary te-hifindra amin’ny Tester/QC/QA.
8. iPhone 3D fandaharana
Ity dia boky lalina momba ny fandaharana lalao 3D amin’ny iPhone miaraka amin’ny OpenGL ES. Raha te hamaky sy hampihatra ny fahalalana eto dia tsy maintsy manana fahalalana fototra momba ny fandaharana lalao iPhone ianao.
“C++ Game Development Primer” dia antontan-taratasy fandaharana lalao C++ tena ilaina.
Ny boky dia ho an’ny C++ Devs efa za-draharaha izay te-hifindra amin’ny fandaharana lalao amin’ity fiteny ity.
Hianatra ny fomba fandrafetana lalao amin’ny teny C++ ianao, ny fomba famoronana lamina, ny fampiharana ny fiteny C++ amin’ny hetsika lalao, ary koa ny fomba fananganana tetikasa lehibe.
Asa Mpamorona lalao ao an-tanànan’i Ho Chi Minh
Asa Mpamorona lalao any Hanoi
Mazava tsara ny fandaharana lalao an-tserasera
1. Fototry ny fampandrosoana lalao miaraka amin’ny Python (Saram-pianarana: $ 14)
Ity dia fampianarana fototra ho an’ny Devs izay efa manana fahalalana fototra momba ny Python ary te hifindra amin’ny fandaharana lalao amin’ity fiteny ity.
Ny fampianarana dia misy lahateny 11 ao anatin’ny 1.5 ora, natao ho tsotra sy mora azo mba hahafahanao manomboka manazatra avy hatrany ary ho lasa mpamorona lalao matihanina.
Amin’ny fiafaran’ity taranja ity dia ho azonao ny fototry ny fandaharana lalao miaraka amin’ny Python, manomboka amin’ny kaody ho an’ny endri-tsoratra, zavatra, hetsika, fanamboarana, sy ny maro hafa.
2. Fampandrosoana lalao HTML5 (maimaim-poana)
Ny fampianarana dia misy lesona 8 ao anatin’ny efa ho 2 volana (6 ora/herinandro) ary manaraka ilay boky fianarana HTML5 Game Development Insight.
Vidéo mora azo ny lesona. Amin’ny fiafaran’ny fampianarana dia ho azonao ny dingana amin’ny fandaharana lalao amin’ny HTML5 sy ny teknika hanatsarana ny fampisehoana.
3. Famolavolana lalao 2D mandroso miaraka amin’ny HTML5 (maimaim-poana)
Te hanatsara ny fahaizanao amin’ny fandaharana lalao 2D amin’ny HTML5?
Ity taranja fanazaran-tena 3 ora, 5 ary 4 ity nataon’i Michael “Mickey” MacDonald – Mpampianatra Teknika ao amin’ny Microsoft Canada sy Bryan Griffiths – Injeniera Software no ho mpitari-dalana mety aminao.
READ Tài Liệu Tự Học Toán 8 | Anybook.vn
Hizara ny fitaovana fampivoarana lalao 2D tsara indrindra izy ireo, ao anatin’izany ny Apache Cordova Tools ho an’ny Visual Studio, Microsoft Azure Cloud Services…
4. Mianara Fampandrosoana lalao C++ (Saram-pianarana: $ 14)
Ny fampianarana dia misy lesona 43 ao anatin’ny 4 ora izay hanampy anao amin’ny fandaharana lalao amin’ny C++.
Lesona ho an’ny mpamorona manana fahalalana fototra momba ny C ++ ary te hifindra amin’ny fandaharana lalao amin’ity fiteny ity.
Ny fampianarana koa dia hanampy anao hampiasa ny tranomboky SFML ho an’ny C++ ary hiasa amin’ny sary sy feo.
Ny lesona rehetra dia tarihin’ny toromarika video tsikelikely izay mora azo.
Rehefa vita ianao dia hanana ny fahaiza-manao ilainao hamoronana sy hampandehanana lalao 2D ho anao manokana.
5. Hevitry ny Unity3d (maimaim-poana)
Unity3D no fitaovana fandrindrana lalao malaza sy tiana indrindra ankehitriny. Ity fampianarana ity dia hanampy anao hianatra ny zava-drehetra momba ity fitaovana ity, ao anatin’izany:
Fahalalana fototra momba ny Unity3D
Teknika amin’ny famoronana zavatra, sary, feo, teny, hetsika
Ahoana ny fananganana lalao amin’ny sehatra hafa toa ny iOS, Android, Linux ary Windows.
Ity kitapo Unity3d ity dia azo ampiasaina hamoronana Apps Mobile ho an’ny asanao hafa.
Noho izany, ity dia fampianarana tena ilaina tsy ho an’ny Mpamorona lalao ihany fa ho an’ny Mpamorona finday hafa koa.
Maharitra adiny 4 ny fampianarana, ahitana lesona na horonan-tsary 50 hanampiana anao handamina ny lalao 3D anao manokana.
Torolalana mahasoa ho an’ny mpamorona lalao
Ity dia tranomboky tsara indrindra amin’ny Tutorials, an’ny tambajotra sosialy LinkedIn. Ny Devs dia hahita fampianarana “kalitao” maro amin’ny karazana lalao sy fiteny fandaharana rehetra.
Ny tahiry malaza Dev’s Tutorials koa dia manana fampianarana lehibe maro ho an’ny lalao misy horonan-tsary sy sary.
Ity dia fitahirizana ny Tutorials of Swift sy Cocos2d, Corona, Unity … miaraka amin’ny horonan-tsary manaitra.
Loharanon’ny Tutorials ho an’ny lalao amin’ny sehatra Android sy forum hifanakalozana sy hianarana ity.
5. Fampivoarana fampiharana Android Tutorials
Fanangonana lesona 100+, fampianarana fandaharana video amin’ny sehatra Android.
Asa lalao ao an-tanànan’i Ho Chi Minh
Asa lalao any Hanoi
Taratasy fandaharana lalao hafa
Ity dia sehatra iray hanavaozana ny vaovao, mizara ny zava-drehetra momba ny fandaharana lalao, tena ilaina ho an’ny Devs rehetra manomboka amin’ny vao manomboka ka hatramin’ny mandroso.
2. Institiota lalao
Ity dia tranokala mampianatra fandaharana lalao matihanina miaraka amin’ny taranja momba ny Game Art & Design, fandaharana lalao fototra, fandaharana lalao mandroso, fandaharana lalao video miaraka amin’ny faharetan’ny volana vitsivitsy ka hatramin’ny 24 volana. Ny saram-pianarana ihany koa dia miovaova avy amin’ny ambany ka hatramin’ny ambony azonao isafidianana.
Fantsona ho an’ny karazana lalao ordinatera sy finday ary asa indostrialy misy lahatsoratra sy fampianarana lalina.
Ity harena ity dia ahitana antontan-taratasy maro sy fampianarana lalindalina momba ny Cocos2d – ilay maotera fandaharana amin’ny sehatra cross-platform malaza indrindra eran’izao tontolo izao ary sehatra iray ahafahan’ny Devs mifampiresaka.
Hijery misimisy kokoa: Ny asa lalao “kalitao” indrindra amin’ny ITviec!
Forums lalao sy tranokalam-baovao amin’ny teny vietnamiana
Ity dia tranonkala fampahafantarana sy loharano hafa momba ny lalao, havaozina isan’andro miaraka amin’ny vaovao momba ny tsena sy asa ho an’ny Dev.
Ity koa dia tranokalan’ny fampahalalana momba ny tsena sy ny fandaharana lalao kalitao, manangona lahatsoratra tsara sy mahasoa maro.
Raha heverinao fa afaka manampy ny namanao na ny mpiara-miasa aminao ireto fizarana ireto dia aza misalasala manindry ny bokotra Partager etsy ambany!
Hijery asa Game Developer bebe kokoa ao amin’ny ITviec
Previous: Những trích dẫn ngập tràn tình yêu trong cuốn sách “All in love” của tác giả Cố Tây Tước | Anybook.vn
Next: Những Bài Thơ Hay Về Phật Khiến Tâm Hồn Của Bạn Bình Yên Và Thanh Tịnh Hơn – Đề án 2020 | Anybook.vn